Yedu Kambani - Shineon Technology Co., Ltd.
ShineOn inotungamira yepasirese LED package uye module solution mupi wemwenje uye musika wekuratidzira. Iyo yakavambwa muna Ndira 2010. Iyo yakavambwa nechikwata che optoelectronics indasitiri nyanzvi vane ruzivo mumakambani epamusorosoro eUS. ShineOn inotsigirwa zvakanyanya neakakurumbira USA uye maChinese emabhizimusi emabhizimusi emabhizimusi, anosanganisira GSR mabhizimusi, Northern Light Venture Capital, IDG-Accel Partner neMayfield, uye inotsigirwawo neBeijing hurumende yemasipala.
ShineOn inovandudza nyika inotungamira mapakeji eLED uye ma module ekuita kwakanyanya, yakafara color gamut TV backlighting uye yeakanyanya kushanda, yakakwira kuvimbika mwenje sosi. Iyo SMD, COB, CSP mapakeji uye DOB mutyairi akabatanidzwa module ave achishandiswa nevazhinji epamusoro TV uye vatengi vechiedza vese.
ShineOn yawana chitupa kubva kuCNAS neEPA yeLM-80 rabhoritari. Iyo yakateedzera yepamusoro MES uye ERP system mune yayo yekugadzira tambo uye yakagadzika yakasimba yakaoma mhando manejimendi system. Chiratidzo chekambani ndechekupa vatengi makwikwi mhinduro uye zvakavimbika zvigadzirwa, uye kuwedzera kukosha kune vatengi vayo.
ShineOn yakazivikanwa seye 2011 Global Yakachena-tech kambani 100, uye yakahwina 2013 Red Hering Global 100 Mubairo. Yakatumidzwa zvakare se2014 Deloitte Yepamusoro 50 Inokurumidza Kukura High Tech Kambani muChina.
Mushure memakore ekukurumidza kukura, kuitira kuti usangane nemusika uri kukura unodikanwa wezvigadzirwa zvemhando yepamusoro zvemagetsi nema module, "Shineon (Nanchang) Technology Co, Ltd." yakavambwa muna Gumiguru 2017 muNanchang. Isu tinotora mukana weBeijing's r & D uye kudyidzana nedzimwe nyika, kusanganiswa neNanchang's kumatunhu nemaindasitiri zvakanakira, kumhanyisa kuwanda kweyekugadzira chiyero chemhando yepamusoro yemagetsi opoelectronic ekupakata zvishandiso uye module module, kusangana nevatengi vekune dzimwe nyika uye vekunze kudiwa kwemhando yepamusoro zvigadzirwa zveShineOn.
Shineon - inozivikanwa yepasi rose ye LED mapakeji uye ma module emagetsi.
Ita chero hunyanzvi hwekugadzirisa pane zvaunoda.
Makore gumi achiramba achivandudza ruzivo mune akatungamira mapakeji uye ma module indasitiri.